ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » မေတ္တာစစ်အွန်လိုင်း Find နိုင်သလား?
မေတ္တာစစ်အွန်လိုင်း Find နိုင်သလား?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 03 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ကိုယ့်ဆယ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏လက်တွေ့နောက်တခုခဲ့သည်, နှင့် ပတ်သက်. သိရှိခဲ့သူကပဲ '' ထွက် '' တကယ်များအတွက်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းအမျိုးအစားများသို့မဟုတ် 'ပုံမှန်နည်းလမ်း' ထဲမှာနေ့စွဲမရနိုင်သူကိုအပူတပြင်းလူများအတွက်မိသည်ဟုထင်.
ကိုမည်သို့ဆပြောင်းလဲကြပြီ! အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလုပ်များယခုစံဖြစ်သည်, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုလားတဲ့လူတွေ, သို့သော်သူကအွန်လိုင်းကချိန်းတွေ့မီးရထားပေါ်ခုန်တက်ကြသူပဲအလုပ်ရှုပ်နေလူတွေမဟုတ်ပါဘူး – အဘယ်သူမျှမ Oh! မုတ်ဆိုးမလာမယ့်တံခါးနားကနေသင့်ရဲ့ဦးလေးဆမ်လူတိုင်းအတွက်မှာဖြစ်ဟန်ရှိ! အဟောင်းနှင့်လုလင်, အသက်ရှည်သမျှနောက်ခံအမျိုးမျိုးမှလူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး, ဘာသာတရား, နွယ်နွယ်နဲ့နောက်ခံကလုပ်နေ. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သာ '' အထီးကျန်ဆန်စိတ်နှလုံးကို '' စဉ်းစားမယ်လို့တစ်ခုခုကနေပြောင်းလဲသွားပြီ, ယနေ့အထိတစ်ဦးလေးလေးနက်နက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလမ်းဖြစ်လာမှ. ပင်လှပ, အောင်မြင်သောလူများကလုပ်နေ, ညာဘက်လူတိုင်းနှင့်အတူ! ငါတို့ရှိသမျှသည်ကဘယ်လောက်အဆင်ပြေပြေသဘောပေါက်တဲ့အတွက်! ဒီအွန်လိုင်းခေတ်တွင်တကသဘာဝကျတဲ့တိုးတက်မှုခဲ့သည်.
ဒါကြောင့်ချိန်းတွေ့ရဲ့အကောင်းအဆိုး cons အွန်လိုင်းဘာတွေလုပ်နေလဲနှင့်သင်အမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဒီနည်းလမ်းရှာဖို့မျှော်လင့်နိုင်?
ကောင်းပြီအကောင်းအဆိုးအချို့သိသာများမှာ. သင်သည်အစဉ်အလာလမ်းတို့ကိုမဆိုအတွက်ချိန်းတွေ့နေဖြင့်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါတတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ထက်သင်ပိုကလူများစွာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရ. သို့သော်လည်းဒီအစအမြီးအတွက်တစ်ဦးလက်နက်နှင့်အတူလာနိုင်သည်, သင်များသည်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့မကြိုက်မပြုစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်သူတွေကိုအများကြီးရှိပါတယ်အဓိပ္ပာယ်. ဒါ့အပြင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း '' မြန်ဆန်ပြီးဝင်ငွေ '၏လူတယောက်ငွေပမာဏလည်းမရှိ, သင်အဘို့ပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်, အတော်လေးပြန်သွား feeling ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထွက်ခွာနိုင်.
ငါ 'မြန်ဆန်ပြီးဝင်ငွေ' 'ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ကောင်းပြီသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကတနေ့နှင့်အတူစကားပြောလျက်ထားစေခြင်းငှါ, သာသူတို့ကိုလုံးဝရေဒါမယ့်ပယ်ပျောက်ပျောက်သွားရှိသည်. ဒီအတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်. သင်တို့ကို replied ဘယ်တော့မှကြောင့် e-mail နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထုတ်ပေးလိုက်မည်ဟုသင်ဖြစ်ဖြစ် reply ဘယ်တော့မှအချို့ရှိသည်ဖြစ်တယ်. ဒါဟာဝေးလျော့နည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးချိန်းတွေ့၏အစဉ်အလာကိုနည်းလမ်းအချို့ထက်င်နှင့်ဤတချို့လူတွေအနှောက်အယှက်မပေးဘူး,. ဒီပိုခက်အဟောင်းမျိုးဆက်ရောက်ရန်ဟန်ကျွန်မသတိထားမိပါပြီ, သူတို့အစဉ်အလာချိန်းတွေ့၏ပိုပြီးယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးအလေ့အကျင့်များအသုံးပြုကြသည်အဖြစ်, နောက်တဖန်သင်တို့ကသူတို့ကိုမူယနေ့အထိမလိုချင်ခဲ့ပါလျှင်ဥပမာသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြမယ့်နေရာ, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်အွန်လိုင်းမကြိုက်သည်မဟုတ် (ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလျှင်ပင်ကဖြစ်သင့်).
သို့သော်သင်သည်ဤသူငယ်ကိုလက်ခံတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနိုင်လျှင်, ငါကလူတွေနဲ့အတူကိုဆက်သွယ်ဘို့ကြီးစွာသော tool ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ထင်, နှင့်ဟုတ်သည်ပင်မေတ္တာကိုရှာဖွေ.
၏သင်တန်းကို e-mail ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအကြောင်း '' တရားဝင် '' အနည်းငယ်လျော့နည်းရင်ခုန်စရာနှင့်ပိုပြီးတစ်ခုခုရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာသင်အလားအလာမေတ္တာကိုအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူရစကားပြောခန်းအဘယ်သို့သော e-mail ကိုမြင်ရဖို့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေရှိနိုင်ပါသည်. နှင့်သင်တန်း၏သင်သည်အမှန်တကယ် '' လူတစ်ဦးမှာ 'ချိန်းတွေ့အဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုရင်, ထိုအချစ်ဇာတ်လမ်းထို့နောက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာတင်ဆက်နိုင်.
သင်တို့သည်လည်းဖြစ်ကောင်းသင်တို့နှင့်အတူအ်မေတ္တာတော်၌ကျလိမ့်မည်မဟုတ်သူလူများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်အချက်ကိုအဘို့ပြင်ဆင်ရပါမယ် – တကယ်တော့၌သင်တို့တိုင်အောင်သူတို့ကိုကြိုက်မည်မဟုတ်! တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးသည်ကြီးစွာသောပရိုဖိုင်းတွေကို post လုပ်နိုင်ပါတယ်သင်တို့မူကားအစစ်အမှန်လောကရှိသူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည့်အခါ connection ကိုရုံမျှမရှိ. အချို့သောလိမ်လည်သူများကိုအွန်လိုင်းရှိပါတယ်ကြောင့်လည်းသတိထားဖ​​ို့, စစ်မှန်သောမဖြစ်ကြပြီးပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်အတွက်ရိုက်စားရန်သင့်ကြိုးစား့ထွက်နေသောလူ. ငါ့အတွေ့အကြုံအတွက်လွန်းဘုံရှိပါတယ်မဟုတ်, သို့ရာတွင်သူတို့ရောနှောရှိတယ်. ပဲ '' ပျော်ပျော် '' သူကလူလည်းရှိပါတယ်, အွန်လိုင်းလိင်ကိုရှာဖွေကြသူလူ, အိမ်ထောင်သက်၌နေသောသူကိုပင်အချို့လူများသည်. သို့သော်သင်သည် De-လှုံ့ဆော်ရဒီကိုင်တွယ်ပုံနှင့်မနိုင်လျှင်, ထို့နောက်သင်တို့သည်ဧကန်အမှန် နိုင် သင့်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောသူသည်အွန်လိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း, အဘယ်သူကိုသင်သည်စစ်မှန်သောအသက်ကိုထခရီးဦးကြိုပြုခြင်းတစ်ချိန်က, သင်နှင့်အတူစစ်မှန်သောအချစ်မျှဝေနိုင်ပါသည်. ငါသည်ဤလမ်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြသူအများအပြားအောင်မြင်သောစုံတွဲများ၏သိ.
ဒါကြောင့် Real Life = စစ်မှန်သောအချစ်.